‘Liyagajwa’ iTheku emakhonsathini amakhulu | IOL Isolezwe
‘Liyagajwa’ iTheku emakhonsathini amakhulu
Isolezwe / 3 August 2012, 4:46pm /
UKUGQOZA kokuthengwa kwamathikithi okubuka izihlabani zomculo zaphesheya kwezilwandle eziphuma zingena kuleli sekwenze inkampani ehlela imicimbi ingalicabangi nhlobo iTheku uma yenza imicimbi.
Lokhu kuvezwe ngokhulumela isikhondlakhondla senkampani ehlela imicimbi okunandisa kuyo izintandokazi zabaculi baphesheya, iBig Concerts, uDionne Domyan-Mudie.
Phambilini iBig Concerts ilethe kuleli abaculi baphesheya okubalwa kubo uMary J Blige, Lionel Richie, Coldplay, Elton John, Usher nabanye kanti iningi lalaba baculi kalizi eThekwini kodwa ligcina eKapa naseGoli.
Kumanje le nkampani ihlele ukuletha iqembu lezinsizwa lomculo we-rock laseMelika, iLinkin Park, lizonandisa eCape Town Stadium ngoNovemba 7 ngaphambi kokudlulela eGoli ngoNovemba 10.
Ngaphandle kwale khonsathi, bahlela ukuletha umculi osolwa “ngobusathane”, uLady Gaga ngoNovemba 30 eSoccer City Stadium naseCape Town Stadium ngoDisemba 3.
UDomyan-Mudie uthe ukungabalethi kwabo abaculi baphesheya eThekwini yingoba abantu bakuleli dolobha bayanqena ukungena emaphaketheni.
“Isizathu (sokungawenzi amakhonsathi eThekwini) yingoba iBig Concert ayiwadayisi amathikithi enele okwenza ukuthi kungene imali futhi intshiselekelo yokufuna abaculi incane. Ngokwejwayelekile iTheku lithenga amathikithi aphakathi kwangu-20 nangu-30 wamaphesenti athengwa ngabantu baseGoli. Abaculi kuyabiza ukubakhokhela kanti izindleko zokubaletha kumele zikhokhwe yiBig Concerts,” kusho uDomyan-Mudie.
Yize iTheku selivame ukushaywa ngesithende emakhonsathini abaculi baphesheya kwezilwandle, libe senhlanhleni ochungechungeni lwamakhonsathi omculi we-R&B waseMelika, u-Anthony Hamilton, ozojabulisa abathandi bomculo “wothando” eWave House, eGateway, ngo-Agasti 19 ngo-3 emini.